Izicathulo Zabantwana Ngokwezifiso, Izicathulo Zamadoda, Imboni Yezicathulo Zabesifazane | Izicathulo zeFowin
IShantou Fowin Footwear Ltd.
UFOWIN ngokukhiqiza ukhiqiza ama-slippers, izimbadada nezicathulo ezikhululekile.
Ukuhlinzeka ngezicathulo zezingane ezinhle kakhulu, izicathulo zamadoda
& izicathulo zabesifazane.
Abaqambi bethu abayi-10 bangenza ngezifiso noma iziphi izinto zethu, noma bakwenzele umkhiqizo omusha kusukela ekuqaleni ngokuya ngemininingwane yakho.
I-ISO 9001: ifektri eqinisekiswe ngo-2000.
Inemigqa emibili yokukhiqiza, i-workshop eyodwa yomjovo nemigqa emibili yokupakisha.
Nikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso
I-Shantou Fowin Footwear Limited yasungulwa ngo-2003. Sisebenza ngokukhiqiza ama-slippers nezimbadada zesikhumba ne-PU nge-EVA ne-PVC soles. Ikhathalogi yethu manje ifaka imiklamo engaphezu kwengu-120 yezicathulo zamadoda ezingokwezifiso, izicathulo zabesifazane ezingokwezifiso nezicathulo zezingane. Sisebenza i-16,000m2, i-ISO 9001: ifektri eqinisekiswe ngo-2000 enezintambo ezimbili zokukhiqiza, i-workshop yokubumba umjovo nemigqa emibili yokupakisha. Amandla ethu enyanga angamabhangqa ayi-150,000. Abaqambi bethu abayi-10 bangenza ngezifiso noma iziphi izinto zethu, noma bakwenzele umkhiqizo omusha kusukela ekuqaleni ngokuya ngemininingwane yakho.
Sineqembu lezinsizakalo zamakhasimende eliqukethe ochwepheshe abangama-20 abasazi kahle isiNgisi nesiJapane futhi sinehhovisi legatsha eDubai elizophatha ama-oda avela esifundeni saseMiddle East. Isikhathi sokuhola sokulethwa yizinsuku eziyi-15 nje. Thola ukuthi kungani abathengi abangaphezu kwabangu-30 kulo lonke elaseNyakatho Melika, eYurophu, eMiddle East kanye naseNingizimu-mpumalanga Asia bethembele kuFowin Footwear. Xhumana nathi namuhla.
Abesifazane Sandal Sandal
Phezulu: pu Ulwelwesi: pu Insole: pu I-Outsole: i-pvc Umbala: beige / gold MOQ: Ama-800prs Usayizi ububanzi: # 36-41 Into yokukhokha: TT / LC Imbobo ye-EX: SHENZHEN / SHANTOU Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-35 Ngithinte: fowin@fowin.cn
Abesifazane Bahlehla Isithende Sesigaxa
Phezulu: pu Ulwelwesi: pu Insole: amakhanv I-Outsole: tpr Umbala: wh / bl MOQ: Ama-800prs Usayizi ububanzi: # 36-41 Into yokukhokha: TT / LC Imbobo ye-EX: SHENZHEN / SHANTOU Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-35 Ngithinte: fowin@fowin.cn
Phezulu: pu Ulwelwesi: pu Insole: i-pvc I-Outsole: i-pvc Umbala: luhlaza okwesibhakabhaka / br MOQ: Ama-800prs Usayizi ububanzi: # 36-41 Into yokukhokha: TT / LC Imbobo ye-EX: SHENZHEN / SHANTOU Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-35 Ngithinte: fowin@fowin.cn
Abesifazane Stone Slipper
Phezulu: pu Ulwelwesi: pu Insole: pu I-Outsole: tpr Umbala: luhlaza okwesibhakabhaka / br MOQ: Ama-800prs Usayizi ububanzi: # 36-41 Into yokukhokha: TT / LC Imbobo ye-EX: SHENZHEN / SHANTOU Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-35 Ngithinte: fowin@fowin.cn
Isungulwe ngo-2003, iyi-
ibhizinisi elisebenza inhlanganisela yokuthuthuka, ukukhiqiza nokuthengisa. I-FOWIN ngobuchwepheshe ikhiqiza ama-slippers, izimbadada nezicathulo ezikhululekile. Ukuhlinzeka ngezicathulo zesilisa ezihamba phambili, izicathulo zabesifazane ezingokwezifiso& izingane izicathulo.
Ngekhwalithi njengeyokuqala, ukwaneliseka kwamakhasimende umgomo uFOWIN awuphishekela ngokuqhubekayo, kanti ukwethemba nokuxhaswa kwabo kungumfutho owenza uFowin athuthuke. Thola ukukhethwa kwamuva kwezicathulo zabesifazane ngokwezifiso, izicathulo zesilisa ngokwezifiso
& izingane izicathulo ezicathulweni ze-fowin.
Yini eyenza amakhasimende ethu
UMA UNEMIBUZO EMININGI,